Vidio: Olee otu ifufe ifufe na-emetụta ahụ mmadụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Monica sanchez | | Nkewa
Homo sapiens kemgbe ọdịdị ya, na-achọkarị ịmatakwu. Ọchịchọ ịmata ihe bụ ihe amụrụ anyị, mana oge ụfọdụ ọ na - eduga anyị ime ihe nwere ike ịbụ nzuzu karịa otu. A bịa na ihu igwe dị iche iche dịka ifufe ma ọ bụ oke ifufe, enwere ndị ga-eme ihe agaghị ekwe omume ịbịaru anyị nso.
Ndị ọkachamara oké ifufe ha na-eme ya n’enweghị nsogbu, nke ahụ bụ naanị otu ụzọ esi eme ya. N'ihi gịnị? Gịnị kpatara ahụ mmadụ, nke doro anya ma dị mfe, enweghị ike ime ihe ọ bụla megide ike nke okike. Ihe nlele nke a bu nnwale a nke onye na-ahu maka ihu igwe bu Jim Cantore mere, edere na vidiyo ma tinye ya na YouTube nke chanel Weather.
1 Ajọ ifufe ifufe na Jim Cantore
2 Kedu ka ifufe ifufe na-esi emetụta ahụ mmadụ?
Ajọ ifufe ifufe na Jim Cantore
Anọ m na-ele vidio nke Ajọ Ifufe Maria nke ebugo na YouTube mgbe m hụrụ ya. Echiche mbụ m bụ: "Jim Cantore na-eme ihe nzuzu dị ebube ọzọ? Nkwa a ". Ee Ee, ọzọ. Amaghị m ma ị ga-echeta ederede na anyị bipụtara na 2015, na vidiyo nke Cantore gosipụtara nke nwere ịtụnanya na obi ụtọ n'ihi na ọ nweela ike iji anya ya hụ ka àmụmà si daa na snowy, ihe dị iche. Nakwa, ugbu a, ị banyere oghere ikuku ebe ị ga - alụ ọgụ megide ike ebupụtara nke oke ifufe 5 nke Atiya.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ na-esi na obere erute. Iji mata echiche nke mmetụta ị nwere ike inwe, ị ga-amata ihe ụdị ifufe bụ na ihe ike ha bụ:
Nkeji 1: ifufe ahụ dị n’agbata 119 na 153km / h. Ọ na-ebute idei mmiri n'akụkụ osimiri, na ụfọdụ mbibi ọdụ ụgbọ mmiri.
Nkeji 2: ikuku ikuku di n’agbata 154 na 177km / h. Ọ na - ebibi elu ụlọ, ibo ụzọ na windo, yana mpaghara ndị dị n’akụkụ osimiri.
Nkeji 3: ifufe ikuku dị n’agbata 178 na 209km / h. Ọ na-ebibi mbibi n'ụdị obere ụlọ, ọkachasị n'akụkụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ma na-ebibi ụlọ ndị na-agagharị agagharị.
Nkeji 4: ifufe ahụ dị n’agbata 210 na 249km / h. Ọ na-ebibi ihe owuwu zuru oke nke ụlọ nchedo, ụlọ nke obere ụlọ na-ada, osimiri na mbara ala na-emebi.
Nkeji 5: ikuku ikuku karịrị 250km / h. Ọ na-ebibi elu ụlọ, oké mmiri ozuzo na-akpata idei mmiri nke nwere ike iru ala ala nke ụlọ ndị dị na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, na mkpochapụ nke ebe obibi nwere ike ịdị mkpa.
Kedu ka ifufe ifufe na-esi emetụta ahụ mmadụ?
Ndị nke otu 1 adịlarị oke karịa ka akpụkpọ anụ nke agba agba na-agagharị ma mee ka ị ghara itule. Ọ bụrụ na kụrụ gị ihu na ihu, nsogbu iku ume na-adịkarị mkpa. Cheedị ma ọ bụrụ na ha bụ ifufe 5 dị n'ụdị ... Site n'ike ahụ, ha nwere ike ime ka anyị fee n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Cantore we kpughere ha onwe ya, lee ya. Na afọ ojuju ka ị nweta ndekọ.
DỊ mKPA: Ọ bụrụgodị na i nwere ohere, MGBE ọ bụla agakwuru otu ajọ ifufe. N'ihe banyere oke ifufe ma ọ bụ oke mmiri, ị ga-echebe onwe gị na ebe ndị dị mma, ma beaa ntị na amụma ihu igwe n'oge niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Vidio: Olee otu ifufe ifufe na-emetụta ahụ mmadụ?
Kedu ihe gbara ọchịchịrị na gịnị ka ọ bụ maka ya?